Blockchain News 29 EyoMqungu 2018 - Blockchain News
EyoMqungu 29, 2018 admin
Enye yeevenkile zombane inkulu Japan ngoku Yamada Denki yamkela Bitcoin
Yamada Denki, enye yeevenkile zombane enkulu yaseJapan, ubhengeze ukuba nisamkela Bitcoin njenge indlela yokubhatala.
Ba ngokubambisana ne Bitflyer, kwaye bekhumbula uphuhliso olutsha, Bitflyer enikeza isipho 500 yen lokuqala 500 abathengi ohlawulayo forex virtual.
South Korea kaThixo umthengisi kunye e-commerce omkhulu WeMakePrice ukwamkela 12 cryptocurrencies
of kePrice, eyaziwa ngokuba Wemepu, enye kumaqonga inkulu e-commerce South Korea kunye nabathengisi olukhulu uceba nokuvuma 12 cryptocurrencies, kubandakanya Bitcoin, ngokubambisana ne Bithumb, inkulu cryptocurrency irandi lizwe.
WeMakePrice undongezelele cryptocurrencies ukuba iintlawulo ezikhoyo yayo iqonga OneThePay. Xa ukuhlanganiswa lugqityiwe, abasebenzisi WeMakePrice ekhoyo iza kukwazi ukuthenga izinto kunye neenkonzo usebenzisa cryptocurrencies.
Kudliwano-ndlebe kunye South Korean imithombo yeendaba iplagi HanKyoReh, a isithethi WeMakePrice lowu inkampani iye kufika kwisigqibo cryptocurrencies ekuhlanganiseni njengenxalenye yelinge ezinkulu lula inkqubo yentlawulo abathengi jikelele.
"…ukwenza iintlawulo lula ngakumbi kubathengi bethu kunye nabathengi. Siqwalasela apps fintech mobile, iingongoma, kunye cryptocurrencies njengoko indlela ekuhlawuliswa kakuhle,"Uthe ke isithethi.
Ingxelo esemthethweni Le nkampani ekhankanywe: "Service intlawulo bitcoin… inkonzo ephuculiweyo lula. "
BTCC ezifunyenwe yi blockchain ingxowa mali Hong Kong-based
Bitcoin imigodi kunye ukutshintshiselana yeMetro BTCC iye ezifunyenwe yi-mali yotyalo ngagama Hong Kong-based blockchain. Ezi zibonelelo ziya kunceda ukuxhasa ugxininiso BTCC zehlabathi njengoko kusa- imarike Chinese.
ishishini BTCC iye ezafika yi lokulawula sibange-phantsi e-China, leyo kwavalwa urhwebo cryptocurrency kwi ukutshintshiselana ezisekelwe kweli lizwe. Ngoku Beijing uye Bitcoin ezimayini izinto zayo umpu, ngokutsho Iingxelo zakutshanje kwi FT nakwezinye iindawo.
A isithethi BTCC wathi: “Thina Okwangoku ke ukukhupha ulwazi kwi-mali okanye ubungakanani bezibonelelo avuswe.”
I BTCC exchange orhwebelana ngaphezu $25 billion ezixabisa zemali 2017. BTCC ka-Mobi isipaji, leyo yaqaliswa ngo March 2017, ngoku abathengi ukusuka 180+ amazwe, kuqhuba lo kusho.
Kwingxelo BTCC co-ngumseki Bobby Lee uthe: “ukufunyanwa Namhlanje isehlakalo eningenakukholwa ngenxa BTCC ukuba sisebenze wonke umsebenzi wethu nzima kule minyaka imbalwa idlulileyo. Mna yimincili kakhulu malunga izibonelelo oku BTCC ukuba ukuhamba ngokukhawuleza kwaye ngamandla kukhule amashishini ethu 2018 nangaphaya.”
Post Previous:Blockchain News 28 EyoMqungu 2018
Post Next:Blockchain News 30 EyoMqungu 2018